Vokatry ny sary CSS 35 izay tsy azonao adino amin'ny tranokalanao | Famoronana an-tserasera
Manuel Ramirez | | CSS, sary
Androany dia misy sary amin'ny tranonkala nanjary mpandray an-tsaina lehibe ho an'ny mpampiasa izay manatona azy amin'ny lohahevitra isan-karazany. Avy amin'ny sary, fitsangatsanganana, vokatra na sehatra rehetra, ny sary dia iray amin'ireo singa manandanja indrindra, koa raha afaka mamokatra vokatra manaitra isika, dia hanana hery hitazomana ilay mpampiasa nianjera tamin'ny tranokalanay ny sary.
Izany fotsiny no fahitan'ny maro amin'ireo vokatra ireo amin'ny mpitsidika tranokala. Ny vokatra CSS izay tena mahasarika amin'ny tranga sasany ary ny an'ny hafa dia manana tanjona ny ho tsotra kokoa izy ireo, na dia mahatratra hatrany izay tadiavintsika rehetra aza: ny mpampiasa dia mailo hatrany ny zavatra rehetra atolotry ny tranonkalantsika. Andao tohizana ny lisitr'ireo sary CSS 33 izay misarika ny sain'ny olona.
1 Sarin-javatra miolakolaka 3D
2 3D hover effet
4 Sary amin'ny fomba fijery "mitongilana"
5 Jamba Venetiana
6 Sary nizara
7 Vetivety ny sary
8 Vokatra fitaratra
9 Sary misy vokany taratra
10 Sary mitongilana amin'ny vokatr'izany
11 Hover blur effet
13 Vokatry ny hover amin'ny SVG
14 Avy amin'ny lahatsoratra ka hatramin'ny sary mihetsika
15 Mampiharihary ampahany amin'ny sary afara
16 Manaova sarimiaina
17 Vokatry ny fanaraha-maso
18 Famolavolana sary
19 Vokatry ny fanamoriana
20 Vokatry ny vera fanamafisana
22 Effets overlay CSS
23 Hovy sary
24 Fametahana sary
25 Vokatry ny overlay sary
26 Vokatry ny overlay sary
27 Vetivety amin'ny sary mihetsika miaraka amin'ny sarimiaina
28 Fiarovan-tena amin'ny dikanteny
29 Vokatry ny fitarihana 3D
30 Haavo sary
31 Vokatry ny aloka iOS amin'ny React
33 Vokatry ny tetezamita sary
34 Hikorisa ny fifindran'ny sary
35 Mikorisa ny sary amin'ny kodiaran'ny totozy
Sarin-javatra miolakolaka 3D
Tena mahatalanjona ity sary ity rehefa esory ao anaty boaty 3D ny sary izay afaka mihodina manodidina ny fahamendrehany hamokatra vokar-maso lehibe. Miorina amin'ny CSS3D, raha hainao ny mampihatra azy amin'ny tranokalanao dia tsy ho moana ny mpitsidika anao.
3D hover effet
Vokatry ny maso lehibe iray hafa mba hahatratrarana izany raha avelantsika ny pointer totozy amin'ny sary dia ity mianjera toy ny voadona tamin'io ihany. Sarimiaina mahafinaritra ho an'ny vokatra sary lehibe hafa.
Miara-miasa ny HTML sy ny CSS mba hanamboarana a effets panorama tsara toy ny hoe eo an-tampon'ny tranobe iray ao an-tanàna izahay no mijery.
Sary amin'ny fomba fijery "mitongilana"
Un fanandramana hita maso izay afaka manatanteraka tanjona manokana amin'ny maha-ampahany amin'ny tranonkala.
Vokatry ny fahitana tsara isaky ny mandeha avelao ny pointer totozy ka miova eo anelanelan'ny roa mifanohitra omen'ny sary.
Amin'ny alàlan'ny fametahana ny totozy totozy amin'ny sary dia hohalehibeazina mba hahavita hifangaro tanteraka.
Vetivety ny sary
Vokatry ny tambajotra no vokarina rehefa miala el fanondroana totozy amin'ny teboka manokana avy amin'ny sary.
Ny sary horonana misy vokany fitaratra rehefa atsofotsika ny fanondroana totozy avy eo ankavanana miankavia ary ny mifamadika amin'izany.
Sary misy vokany taratra
Hetsika mitady asehoy ny vokatr'ilay taratra amin'ny sary izay nampiasainay ho an'ity sary CSS ity.
Sary mitongilana amin'ny vokatr'izany
Afaka mahatratra mahazo fanina kely mahita ny fomba amam-panao vokany roa mahavariana ny sisin'ny sary.
Hover blur effet
Rehefa mamindra ny tondro amin'ny alàlan'ny sary isika, mamokatra vokarin'ny blur izay levona afaka segondra.
Misy ny vokatry ny famindran-toerana amin'ny fotoana mitovy izay hametrahantsika ny tondro totozy ambonin'ny sary.
Vokatry ny hover amin'ny SVG
Fihetseham-po lehibe izay mametraka nanala sarona ilay sary miafina ambanin'ny anarana ihany. Famaranana tsara sy tonga lafatra amin'ny fampisehoana galeriana mamorona sy mahaliana ny sary.
Avy amin'ny lahatsoratra ka hatramin'ny sary mihetsika
Mampiharihary sary ny lahatsoratra rehefa mihetsika miaraka amin'ny sary mihetsika mahasarika ny maso ny mpanondro totozy misy vokany jamba izay misokatra avy eo afovoany.
Mampiharihary ampahany amin'ny sary afara
Toy ny hoe eo am-pelatanantsika ny crosshair an'ny solomaso telephoto, ampahan'ny ampahany amin'ny sary ambadika rehefa manetsika ny totozy totozy isika.
Misy vokany lehibe, nefa tena tsotra amin'ny endriny. Raha mitady zavatra ianao simplistic sy minimalist, io vokany io dia hahatonga anao ho tia.
Vokatry ny fanaraha-maso
iray hafa vokany tsotra ho an'ny tanjona manokana.
Izany no effet zoom mahazatra Azo antoka fa te handray ny tranokalanao izao ianao.
Vokatry ny fanamoriana
Alternative hafa toa effet zoom raha avelantsika ny tondro totozy nipetraka teo amin'ilay sary.
Vokatry ny vera fanamafisana
Araka ny tondroin'ny anarany, ny totozy totozy dia hamadika ny sary amin'ny vera manelatselatra izay manitatra azy.
Effets overlay CSS
Un effets CSS madio ho an'ny sosona izay miorina amin'ny sary ananantsika.
Manana tranomboky misy ny sarimiaina CSS ho an'ny singa mpampiasa ianao. Azonao atao ny mahita azy rehetra ao anaty rohy mba hahazoana ilay mety indrindra aminao. Misy vokany maromaro azonao isafidianana tsara kalitao.
Miaraka amin'ny sarimiaina andalana avo lenta, Ny layering mahasarika maso no asongadina. Iray hafa izay mety ho lasa tianao indrindra.
Vokatry ny overlay sary
Miverina isika miaraka amin'ny vokatra hafa an'ny overlay amin'ny HTML sy CSS izay ny tsipika boribory no mpandray anjara fototra.
Vokatry ny overlay manaitra izay azo ampiasaina amin'ny singa web samihafa. Miaraka amin'ny kely ny famoronana azo ampidirina amin'ny karatra toy ireo ao amin'ity lahatsoratra ity.
Vetivety amin'ny sary mihetsika miaraka amin'ny sarimiaina
Kalitao avo lenta miaraka amina sary mihetsika sary an-tsaina izay hanala anao amin'ny fanovana vitsivitsy voalohany. Izy dia afaka ampitao hahomby tokoa ny lahatsoratra.
Fiarovan-tena amin'ny dikanteny
Fihetseham-po lehibe iray hafa dikanteny izay miseho miaraka amina sary mihetsika tena malama ary tratra.
Vokatry ny fitarihana 3D
Iray amin'ireo sary mampientam-po indrindra ho hitanao amin'ny lisitra iray manontolo. ny ny totozy totozy dia ho lasa mpitari-dalana ho an'ny «3D cube».
Vokany tsotra hafa, fa tena misehoseho nefa tsy miroborobo be.
Vokatry ny aloka iOS amin'ny React
Un vokany tsy misy fanfarezana be, fa tena mivaingana amin'ny vokarin'ny aloka vokariny, satria toa toy ny nakarina avy amin'ny "tany" izy io.
Ny mpanondro totozy dia manana vokany 'manery' amin'ny sary izay miteraka realisme lehibe. Tena mahaliana.
Vokatry ny tetezamita sary
Un vokatry ny tetezamita mahafinaritra izay ny sary dia lo amin'ny lozam-pifamoivoizana. Azonao atao ny mifehy ny fotoana isehoan'ny vokany sy maro hafa.
Hikorisa ny fifindran'ny sary
Un vokan'ny tetezamita tena lamaody sy mamorona ho an'ny tranonkalanao. Aza adino ny fotoana nifanarahana tamin'ity CSS ity.
Mikorisa ny sary amin'ny kodiaran'ny totozy
Tsy maintsy ampiharo izany amin'ny fotoana ampiasanao ny kodiaran'ny totozy hivadika sary iray mankany amin'ny iray hafa miaraka amina sary mihetsika lehibe. Spectacular.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » teknolojia » CSS » 35 dia tena mampientanentana ny sary CSS
Sandy Hernandez dia hoy izy:
Salama. Tena tiako ny vokatra navoakanao. Sendra ho fantatrao hoe ahoana ny vokany eo amin'ny fametrahana ny pointer amin'ny sary iray ary mihetsika hatrany ambany ka hatrany ambony izy, mety amin'ny fampisehoana topy maso an'ireo pejin-tranonkala. Ity misy ohatra iray momba ny tiako holazaina, ao amin'ny fizarana «JOBA WEBSITE farany ambany
»Avy amin'ny tranokala selectawebs.com
Valiny tamin'i Sandy Hernández
Pejy sy lahatsoratra tsara indrindra, tena nilaina tamiko izy io hatramin'ny nilaiko ny vokany ho an'ny tontonana fidirana amin'ny vavahady amin'ireo rindranasa anatiny. Misaotra betsaka noho ireo fandraisana anjara ireo.
gabriel mihodina dia hoy izy:
Vokany tena tsara. Ampianarina aho, tiako be foana ny hevitra momba ny fampiroboroboana tranonkala, tiako ny torohevitrao momba ny fomba hanombohana sy ny tokony ho fianarana. jerena
Mamaly an'i gabriel rotger
Salama, misaotra tamin'ny atiny. Jereo izao ny pejinao. Mahagaga izany. Tsy misy farany ny famakiana sy ny fangatahana azo atao ao. ;)
Salama Natalia! Faly aho fa mankafy ny famakiana eto amin'ny Creativos Online ianao. Mirary ny soa indrindra!
Mendoza dia hoy izy:
Hey lisitry ny vokatra tsara mahavariana, mahafinaritra be ny mahita ny fomba fampiharana azy ireo amin'ny wordpress miaraka amin'ny elementor
Mamaly an'i mendozalz
Ny penitra nomerika Bamboo Tip vaovao: ny vahaolana Wacom ho an'ny Android sy iOS